तराईमा जग्गा किनेर झर्न तयार परेका कार्की परिवारका ६ जनाको कस्ले गर्यो ह’त्या ? – Ap Nepal
तराईमा जग्गा किनेर झर्न तयार परेका कार्की परिवारका ६ जनाको कस्ले गर्यो ह’त्या ?
September 7, 2021 900
संखुवासभाको उमलिङमा एकै परिवारका पाँचजनाको ह त्याको कारण पैसा रहेको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । पैसा लुट्ने उद्देश्यका साथ ह त्या भएको निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको बुझिएको छ ।
२० भाद्रको राति मादि नगरपालिका १ स्थित उमलिङमा घरमुली ८५ वर्षीय बौदमान कार्की मात्र जिवित भेटिएका थिए । उनकी ८४ वर्षीया पत्नी पार्वती कार्की, ५२ वर्षका छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी ५२ वर्षीया कमला कार्की, नातिनी बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, पनाति वर्ष ८ का विपिन कार्की र पनातिनी वर्ष ५ की गोमा कार्की मृ’त फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार पार्वतीको श’व घरमा नै फेला परेको थियो । तेजबहादुरको श’व रोडको भित्तामा, कमला र रञ्जनाको श’व खोलामा भेटिएको थियो । विपिन र गोमाको श’व एक किलोमिटर टाढा बारीमा मृ’त फेला परेको थियो ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट वृद्धाको ह त्या पछि छोराबुहारी र नातिनीबुहारीलाई नियन्त्रणमा लिएर टाढा लगी ह त्या गरेको देखिएको छ । लुटे’राहरुलाई मृ’तकले चिनेको र अप’राध खुल्न सक्ने ठा’नेर ह’त्या गरेको हुनसक्ने अनुसन्धानले देखाएको प्रहरी स्रोतले बतायो । ८ वर्ष र ५ वर्षका बालबालिकाको पनि हत्या हुनुले नजिकका आफन्त वा चिनेजानेकाहरुतर्फ अनुसन्धानको सुई घुमेको बुझिएको छ ।
घरको अवस्था र पैसाबारे समेत सूचना पाएको समूहले ह’त्या गरेको हुनसक्ने देखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । घटनामा धारिलो हतियारको प्रयोग भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कार्की परिवारले झापामा जग्गा किन्न बैना गरेको र केही दिनपछि जग्गा पास गर्ने सहमति समेत गरेको बुझिएको छ । जग्गा खरिदका लागि परिवार मिलेर ८० लाख रुपैयाँ संकलन गरेर ठिक्क परेका थिए । बैनावापत् केही रकम दिएर बाँकी रकम घरमै राखेको र त्यो सूचनाका आधारमा ह त्या गरी लु’टिएको हुनसक्ने आधारमा अनुसन्धान बढाइएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान टोली संखुवासभाको उमलिङमा खटिएको छ । तालिमप्राप्त कुकुरहरुको समेत प्रयोग भएको छ । विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान बढाइएकाले केही दिनमै खुल्नसक्ने बुझिएको छ । तर, प्रहरीले तथ्यप्रमाणहरु संकलन गरेपछि मात्र अप’राधीलाई निय’न्त्रणमा लिने गरी अनुसन्धान बढाएको बुझिएको छ ।
Prevप्रहरी हिरासतमा रहेका कामतको मृ, त्यु, आफन्त भन्छन् मृ, त्यु रहस्य, मय रहेको भन्दै छानबिनको माग (भिडियो सहित)
Next१८ बर्षमै आ, काशमा जहाज उडाउने नेपालकै सबैभन्दा कान्छी पाइल ट, यसरी साटीन आफ्नो कुरा (भिडियो सहित)